HP G6-2023TX ~ The ICT.com.mm Blog
HP G6-2023 TX Model တစ်မျိုးနဲ့ HPကို နှစ်သက်တဲ့ Customerတွေအတွက် မိတ်ဆက် ပေးချင်ပါတယ်။ HP G6 2023TXဟာ Body Colourက အဖြူရောင်လေးနဲ့ ဖြစ်ပြီး Intelရဲ့ တတိယ မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Ivy Bridge Core i5/ 3210M Processorကို အသုံးပြုထားပြီး အမြန်နှုန်း ကတော့ 2.5 GHz ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Memory ပမာဏကိုလည်း4GB DDR-3 1600MHzကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများ စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ များပြားလှသော Dataများအတွက်လည်း Data Storage ပမဏ 750GBထိ ပါရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Dataများများ သိမ်းဆည်း လိုသူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Graphic Performance ကောင်းကောင်း သုံးလိုသူများ၊ Gamerများအတွက် ATI Radeon (TM) 7670M Graphic 2GB ထိ ပါရှိမှာ ဖြစ်သည့်အပြင် Screen Sizeကလည်း 15.6″ HD LED Bright View ပါရှိသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများ အထူး စိတ်တိုင်းကျစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Audioပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ SRS Premium Sound Systemကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ DVD Super Multi DL Drive, USB 2.0 x3Port, HDMI, VGA, Wi-Fi, Card Reader, Webcam, Bluetoothတို့ ပါဝင်ပါတယ်။6Cell Li-ion Batteryကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် Battery Life Timeက up to 4hour အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Warranty အနေနဲ့လည်း 1 Year Fully Warranty ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
G6-2003TX, HP, laptop
Newer Lenovo ThinkPad Helix
Older HP Spectre XT 13-2009
HP Pavilion 15-ab056TX (i7)
မြန်မာပြည်၏ တရားဝင်ဖြန့်ချီခွင့်ရရှိထားသော Royal Smart Co., Ltd. မှ အသစ်ထပ်မံတင်သွင်းလိုက်သော hppavilion series အသစ်လေးဖြင့် မိတ်ဆက်ပေး...
Desktop, News, Review
HP Pavilion 20-2222x (i3) (AIO)
မြန်မာပြည်၏ တရားဝင်ဖြန့်ချီခွင့် ရရှိထားသော Royal Smart Co., Ltd. အနေဖြင့် အသစ်အသစ်သော နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော HP Products အသစ်...
HP Back To School Promotion Media Document
ကမ္ဘာကျော်အမေရိကန် Brand တစ်ခုဖြစ်သော HP ၏ မြန်မာပြည် တရားဝင်ဖြန့်ချီရေး ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော Royal Smart Co.,Ltd. မှ HP Back To School ...
HP Pavilion 14-n227TX (i7)
Royal Smart Tradingမှ ပေးပို့လာသောသတင်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်၏ တရားဝင်ဖြန့်ချီခွင့်ရရှိထားသော Royal Smart Trading...
HP Pavilion 14-n265TX (i3)
Royal Smart Trading မှ ပေးပို့လာသောသတင်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်၏ တရားဝင်ဖြန့်ချီခွင့်ရရှိထားသော Royal Smart Tr...
Royal Smart Tradingမှ ပေးပို့လာသော သတင်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်၏ တရားဝင်ဖြန့်ချီခွင့်ရရှိထားသော Royal Smart Tradin...
HP Pavilion 20-a220l (AIO)
မြန်မာပြည်၏ တရားဝင်ဖြန့်ချီခွင့်ရရှိထားသော Royal Smart Trading Co., Ltd. မှ အသစ်ထပ်မံ တင်သွင်းလိုက်သော hp pavilion series အသစ်လေးဖြင့် ...